नेपाल-भारत सिमानामा तारबार गर्ने ओली सरकारको निर्णय ! राम्रो काम लागे सेयर गर्नुहोला - Nepali in Australia
June 15, 2021 autherLeaveaComment on नेपाल-भारत सिमानामा तारबार गर्ने ओली सरकारको निर्णय ! राम्रो काम लागे सेयर गर्नुहोला
नेपाल-भारत सिमानामा तारबार गर्ने ओली सरकारको निर्णय ! राम्रो काम लागे सेयर गर्नुहोलानेपाल भारत सिमानामा तार बार गर्ने प्रस्ताव आएको छ । यो प्रस्ताव सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट आएको हो । त्यहाँ निर्वाचित एक सांसदले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले प्रदेश सभामा बोल्दै उक्त प्रस्ताव राखेका हुन् ।
नेकपा एमालेका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा तारबार गर्न माग गरेका थिए ।प्रदेशसभामा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको थियो । सोही क्रममा आइतबार धारणा राख्ने पालो ताराको थियो ।
उनले बोल्ने क्रममा सीमा नाकामा आइपर्ने समस्या सामाधान गर्ने विषय नसमेटिएको बताउँदै उनले तारबार लगाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । संसदमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य ताराले भने, ‘बेलौरीमा हुलाकी सडकको काम गर्दा भारतीय एसएसबी आएर ध म्क्या उ ने गरेको छ ।****यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला*****